China Phlogolite mika plate mpanamboatra sy mpamatsy |Topower
Ny takelaka mika phlogolite dia vita amin'ny akora mica ore avo lenta mba hamoronana taratasy mika, ary avy eo miaraka amin'ny adhesive avo lenta ary tsindriana amin'ny hafanana avo sy ny tsindry ambony.Izy io dia manana fanoherana hafanana tsara, tsy fahampian'ny lelafo ary insulation elektrika.
Mica board dia vita amin'ny taratasy Muscovite avo lenta, taratasy phlogopite na taratasy mika synthetic ho fitaovana fototra,
resin silicone hafanana ho toy ny adhesive, nendasina sy nanery amin`ny hafanana ambony.
Hard mika board dia novolavolaina manokana ary natao hifanaraka amin'ny fepetra takian'ny insulation amin'ny hafanana ambony sy ny insulation elektrika.Izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny indostria manaraka:
1. Indostrian'ny kojakoja an-trano (anisan'izany ny lafaoro, fanasan-damba, fanamainana volo, kettle elektrika, vy elektrika, fanafanana rivotra, curler, herinaratra
tariby heater, rindrina rindrina, sns.)
2. Indostria metallurgique (lafaoro elektrika matetika, lafaoro matetika indostrialy, lafaoro arc elektrika, sns.)
3.Industria simika sy indostrian'ny fitaovana fitsaboana, toy ny bracket fanafanana, gasket, fisarahana, sns
Ny takelaka mika phlogolite mahatohitra hafanana dia manana hatevin'ny fanamiana, fananana elektrika tsara ary hery mekanika;izy io dia karazana vaovao amin'ny birao fitaovana elektrika sy mafana.Ny mari-pana miasa maharitra amin'ny birao phlogopite dia 800 ℃, ary ny hatevin'ny birao mika matetika indrindra dia eo anelanelan'ny 0.1-1.0mm
Tena tsara toetra insulation mari-pana, ny hafanana ambony indrindra fanoherana ny 1000 ℃.
Fahombiazan'ny insulation elektrika tsara, ny mari-pamantarana fahatapahana malefaka amin'ny vokatra mahazatra dia avo toy ny 20KV / mm.
Ny herin'ny flexural tsara sy ny fahombiazan'ny fanodinana, ny vokatra dia manana tanjaky ny flexural avo sy ny hamafin'ny tena tsara, ary azo karakaraina amin'ny faritra samihafa miendrika manokana amin'ny lathes, milina fitotoana ary milina fandavahana tsy misy delamination.
Ny conductivity mafana ambany, ny fananana insulation elektrika tsara, ny solika sy ny fanoherana ny harafesina, ny solon'ny asbestos.
Phlogolite mika lovia be ampiasaina amin'ny fanamainana volo, toasters, vy, heaters, rice cookers, lafaoro, rice cooker, heaters, microwave lafaoro, fanafanana sy ny hafanana insulation sy ny vokatra elektrika hafa.
Properties Brand Mika misy Lamba Fibre Glass amin'ny lafiny roa
Halavany (m) 20-100
sakany (m) 1
Haavo (mm) 0.2-0.8
Mika Content(%) ＞83
Vato vera(%) 8~10
Votoatin'ny binder（%) 8~10
Henjana (N/15mm) ＞ 400
Herin'ny dielectric (KV) ＞4.0
Conductivity mafana (W/mK) 0.3
Fanitarana mafana (10-6/K) 100
Fitondrana hafanana (W/mK) 3
Fanondroana fanaraha-maso (v) 525
Fire Grade (℃) 750~800
Fanondroana oksizenina 90
teo aloha: Ambohipihaonan'ny
Manaraka: Microporous board
Tady fibre seramika